ကြက်တောင်ပံကင် | Wutyee Food House
« အနောက်တိုင်းစတိုင် အားလူးကက်တလိပ်ကြော်
December 18, 2011 by chowutyee ကြက်တောင်ပံကင်
New Year ပါတီမှာ လုပ်စားဖို့ နောက် အကင်သစ် တမျိုးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အကင်ဆိုလျှင် ကြက်တစ်ကောင်လုံး၏ အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ကြက်တောင်ပံကင်ကို လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ကြက်တောင်ပံကို ၀ါးတံစို့ဖြင့် ကင်တာမို့ ကြက်တောင်ပံ မျက်နှာပြင်ပိုမို မီးနှင့်ထိတွေ့လျှင် ပိုပြီ စားလို့ကောင်းလေပါပဲ။ အရသာကလည်း ချဉ်ချိုလေးနဲ့ ထောပတ်အနံ့လေးပါ သင်းနေပါတယ်။ ပါတီပွဲတွေ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီကြက်တောင်ပံကင်လေးကို လုပ်စားကြည့်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်…
ကြက်တောင်ပံ [chicken wings] ♦ ၈ခု
ကြက်သွန်မြိတ် [spring onion] ♦ ၁စည်း (ပါးပါး လှီးထားပါ)
ထောပတ် [butter] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ [garlic] ♦ ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ဂျင်း [ginger] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (ထောင်းထားပါ)
ထိုင်းငရုတ်သီးဆော့အစပ် [thai hot sauce] ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း (သို့) ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆော့အစပ်
ကင်နည်း [Grill Recipes]
၁။ အရင်ဆုံး ကြက်တောင်ပံများကို ၀ါးတံစို့များဖြင့် မျက်နှာတစ်ခုလုံးဆန့်ထုတ်အောင် ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း သီထားလိုက်ပါ။
၂။ ပြီနောက် ဆော့ရည်စချက်ပါမည်။ ဒယ်ထဲ ထောပတ် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)ထည့်ပြီ ပျော်သွားလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းများကို ထည့်ပြီ မွှေပေးပါ။
၃။ ပြီနောက် ကျန်ထောပတ်၊ ထိုင်းဆော့၊ သံပရာရည်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်ပတို့ကို ထည့်ပြီ ဆူလာလျှင် မီးပိတ်ထားလိုက်ပါ။
၄။ ဆော့ရည်ကို ခေတ္တမျှ အအေးခံပြီ အခန်းအပူချိန်တွင် ထားထားပေးပါ။
၅။ ပြီမှ ကြက်တောင်ပံပေါ်သို့ ဆော့ရည်များကို လောင်းချလိုက်ပါ။
၆။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၁နာရီခန့်ကြာအောင် နှပ်ထားပေးပါ။
ရ။ ကင်မည်ဆိုလျှင် မီးကင်ပြားကို ဆီအရင်သုတ်ထားပေးပါ။ မီးသွေး (သို့) ဂက်(စ်) ကြိုက်ရာဖြင့် ကင်နိုင်ပါသည်။
၈။ မကင်ခင် ကြက်တောင်ပံနှင့် နှပ်ထားသော ဆော့ရည်များကို မီးဖြင့် အနည်းငယ် အပူပြန်ပေးပြီ ခွကတစ်ခုထဲတွင် ထည့်ထားပေးပါ။
၉။ မီးကင်ပြားပေါ်သို့ ကြက်တောင်ပံများကို တဖက်ကို ၈-၁၂မိနစ်ထိ မိနစ်၂၀ခန့် ကျက်သည်အထိ ကင်ပေးပါ။
၁၀။ ကြက်တောင်ပံကင်များကျက်ပြီ ဆိုမှ ခုနက ပြန်အပူပေးထားသော ဆော့ရည်များကို လောင်းချပြီ အပေါ်မှ ကြက်သွန်မြိတ်လေးများ ဖြူးပေးကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 12 Comments	12 Responses
on December 18, 2011 at 10:35 am | Reply wwmoe
on December 20, 2011 at 3:03 pm | Reply chowutyee
on December 18, 2011 at 10:55 am | Reply ခင်ယမုံ
ဝက်သားနဲ့ ဝက်ခေါက်ကင်နည်းလေးတွေပါ သိချင်ပါတယ်ညီမလေးရယ်..
on December 20, 2011 at 3:02 pm | Reply chowutyee
နောက်နေ့မှ ၀က်ခေါက်ကင်နည်း တင်ပေးပါ့မယ်..🙂
on December 18, 2011 at 11:39 am | Reply yuki
ကျေးဇူးပဲ ဝတ်ရည်..ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ် ကင်ဖို့. ….
on December 20, 2011 at 2:59 pm | Reply chowutyee
on December 18, 2011 at 7:30 pm | Reply moe
ကျေး ဇူးပါ ညီမလေးရေ ကိုးရီးယား ကြက် အချိုကြော်ကတော့ ပွဲဦးထွက်နာမည်ကောင်း ရနေပြီ ခု လာပြန်ပြီပေါ့ ကြက်တောင်ပံကင် လက်တွေ့ စမ်းသတ်လိုက် အုန်းမယ်
on December 20, 2011 at 2:52 pm | Reply chowutyee
Plz try it ma!🙂
on December 19, 2011 at 8:09 pm | Reply Cho Wut Hmone
seem easy to make and yummy🙂
on December 20, 2011 at 2:51 pm | Reply chowutyee
Yes yummy, Plz try it!!🙂
on December 20, 2011 at 3:25 pm | Reply tinzar
on December 30, 2011 at 5:00 pm | Reply chowutyee